Stop billions being hidden from service delivery - Amandla.mobi isiZulu
Stop billions being hidden from service delivery
Ngonyaka ka-2012 kuphela, izinkampani eMzansi zafihla phesheya imali edlule ezigidini ezingama-$29 ngenhloso yokubalekekla ukukhokha intela kwa-SARS. Lemali ilingana nokubuyekezwa kweNkandla okuphindwe ka-1300 . Izimali eziphuma ngokungemthetho ziyilimaze kakhulu iNingizimu Afrika. Ibalelwa ku 400,000 imindeni ebingahlomula ngezindlu ngo2012, esaqhubeka nokuhlala emijondolo kanye kuzakhiwo esezigcwele.
UNgqongqoshe weziMali unawo amandla okukushintsha lokhu. Uma singafaka ingcindezi, uNgqongqoshe angayihambela i-summit e-Addis Ababa ukuze kuqokwe ithimba likaHulumeni elizolwa nokephuma kwezimali ngokungemthetho kanye nokugwema ukukhokha intela, okuyinkohlakalo eyenziwa izinkampani ezinkulu. Uma sidedela abomkhakha wangasese kanye nomkhakha womphakathi ukuthi ungaziphenduleli, angeke sikwazi ukulwa nenkohlakalo. Lokhu kuzoholela ekuncipheni kwezimali zokuletha izidingo-ngqangi kulabo abazidinga kakhulu.
Uma sifuna ukulwa nokungalingani, sidinga uhlelo lwentela olungacindezeli abantulayo. Thina sonke esiphila eMzansi sikhokha intela siphinde siphonse esivivaneni ukuletha izidingo-ngqangi ngaso sonke isikhathi lapho sikhokhela i-VAT uma sithenga impuphu noma i-airtime. Empeleni, ngonyaka wezimali ka 2014/15, imali eningi yentela yavela kubantu abajwayelekile ngokukhokha intela ngokwemiholo kanye neVAT. Sikhokha imali ephindwe kabili kunaleyo ekhokhwa izinkampani. Lokhu kusho ukuthi thina sixhasainzuzo yezinkampani sibe sihola amakinati.
Amalunga e-amandla.mobi ebambisene ne-Oxfam South Africa aseqalile ukukhankasa ngalolu daba. Kufanele sibambisane ukuze lolu daba luthathelwe phezulu nguNgqongqoshe weziMali uNene.
Khomishana weSARS Moyane kanye noNgqongqoshe weziMali Gordhan,
Sithula kini ukuthi ungashayi uDisemba 2016 ningakaphasisi i-country-by-country reporting yezinkampani. Sithula futhi ukuthi niphinde nikhiphe imigomo emisha yokushintshana kwemininingwane ngokwezigaba zamazwe kanye nomhlaba.
Uma abakwaSARS bekwazi ukuphoqa abesifazane ukukhokhela inhlanzeko nempilo, kungani behluleka ukuvimba izinkampani ezinkulu kanye nabacebile ekunethezekeni ekugwemeni ukukhokha intela ngofihla inzuzo phesheya?